Siyaasiyiin caan ah oo isku soo sharaxay doorashada xilka madaxweynaha maamulka Galmudug – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Siyaasiyiin caan ah oo isku soo sharaxay doorashada xilka madaxweynaha maamulka Galmudug
Wararka naga soo gaaraya magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in xaaladda siyaasadeed ee ka jirto magaaladaasi ay tahay mid kacsan, iyadoona dhinaca kale dhowr musharixiin oo doonaya inay qabtaan xilka madaxweynaha Galmudug ay haatan is-diiwaan geliyeen.
Musharixiinta illaa iyo haatan codsiyadooda usoo gudbistay guddiga doorashooyinka ee xildhibaanada xilka ka qaaday madaxweyne C/kariin Xuseen Guuleed ayaa la sheegayaa inay ka mid yihiin siyaasiyiin caan ah oo markii horeba ku lug lahaa xaaladda siyaasadeed ee ka jirta Galmudug.
Xildhibaanada baarlamaanka maamulka Galmudug ee xilka ka qaaday madaxweyne C/kariin Xuseen Guuleed ayaa u muuqda kuwa weli ku adkeysanaya inay soo doortaan madaxweyne cusub ee maamulkaasi hogaamiya.
C/kariin Xuseen Guuleed oo weli ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa u muuqda mid aan tallo faro ku hayn, marka loo eego waxa haatan ka soconaya magaalada Cadaado.
Guddiga doorashooyinka ee xildhibaanada xilka ka qaaday madaxweyne Guuleed ayaa shaaciyay inay diiwaan geliyeen dhowr musharixiin oo u taagan doorashada xilka madaxweynaha maamulka Galmudug.
Guddiga ayaa sheegay inay dhawaan qaban doonaan doorashada xilka madaxweynaha maamulka Galmudug, waxaana siyaasiyiinta caanka ah ee codsiyadda soo gudbistay ka mid ah:-
1- Axmed Ducaale Geele Xaaf oo hore u ahaa xildhibaan
2- Khaliif Axmed Ereg oo hore wasiir uga soo noqday dowladda federaalka Soomaaliya
3- Maxamed Cilmi Afrax oo hore ula tartamay C/kariin Xuseen Guuleed
4- Siyaasiga Liibaan Tahliil Warsame.
Dhinaca kale, waxaa magaalada Cadaado weli ka socda waan-waan nabadeed oo ay wadaan xubno ka tirsan labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, waxaana weli muuqata in waan-waantaasi ay socon la’dahay.
Ugu dambeyntii, beel ka mid ah beelaha dhisay maamulka Galmudug ayaa la sheegaya inay haatan ugu horeeyaan ololaha lagu doonayo in madaxweyne cusub ay yeelato Galmudug, iyadoona illaa iyo haatan aan la ogeyn sida uu xaalka ku dambeyn doonno.